အဂေကျြဇျ နဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲကွို သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲမှာ သတငျးထောကျ တဦး ရဲ့ ခကျထနျတဲ့ အမေး ကို ပွုံးပွုံးလေး တုနျ့ပွနျ ဖွကွေားခဲ့တဲ့ #လမျးပတျ - SPORTS MYANMAR
အဂေကျြဇျ နဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲကွို သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲမှာ သတငျးထောကျ တဦး ရဲ့ ခကျထနျတဲ့ အမေး ကို ပွုံးပွုံးလေး တုနျ့ပွနျ ဖွကွေားခဲ့တဲ့ #လမျးပတျ
မနကေ့ အဂေကျြဇျ အသငျး နဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲကွို သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲ မှာ သတငျးထောကျ တဦး ဟာ ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ နညျးပွ ဖရနျ့ လမျးပတျ ကို အနညျးငယျ မာထနျပွီး ထူးခွားတဲ့ မေးခှနျး တခု ကို မေးခဲ့ပါတယျ ။ သို့ပမေယျ့ ဖရနျ့ လမျးပတျ ကတော့ တုနျ့လှုပျရှား မရှိခဲ့ပဲ ၊ အခုလိုမြိုး ပွုံးပွုံးလေးပဲ တုနျ့ပွနျ ဖွကွေား ခဲ့ပါတယျ ။
သတငျးထောကျ – ခငျဗြား ကို ကွညျ့ရတာ အဂေကျြဇျ ကို ရငျဆိုငျရမှာ ကွောကျနလေားဗြ ။
လမျးပတျ – ( ပွုံးလကျြ ) ဒီလို ပွောရအောငျ ခငျဗြား ဘာကို ကွညျ့ပွီး မေးလိုကျတာလဲဗြ ?
သတငျးထောကျ – ခငျဗြား မကျြနှာ က အဂေကျြဇျ ကို ကွောကျရှံ့ နတေဲ့ ပုံပျေါလို့ပါ ။
လမျးပတျ – ( ပွုံးလကျြ ) ဒါက ကြှနျတျော ထားနကွေ မကျြနှာထားပဲလေ ။
သတငျးထောကျ – ခငျဗြား နယူးကာဆယျ နဲ့ ပှဲအပွီးမှာ ပွောခဲ့တာက အဂေကျြဇျ အသငျး ဟာ အရမျး ကောငျးတယျ ၊ အဂေကျြဇျ နဲ့ ရငျဆိုငျမယျ့ အကွောငျးပဲ စဉျးစားနတေယျ ဆို ။
လမျးပတျ – ( ပွုံးလကျြ ) ဟုတျတယျလဗြော ။ အခု ကြှနျတျော တို့ အဂေကျြဇျ နဲ့ ပှဲပွီးရငျ ဘနျလေ နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲ အကွောငျး စဉျးစား ရမှာ မဟုတျဘူးလား ?
သတငျးထောကျ – ခငျဗြားပဲ အဂေကျြဇျ ကို လေးစားတယျ ဆို …
လမျးပတျ – ” ကြှနျတျော အမှနျတကယျ အဂေကျြဇျ အသငျး ကို လေးစားပါတယျ ။ မနှဈ က ဒီ အသငျး အရမျး ခွစှေမျး ထကျမွကျခဲ့တယျ ဆိုတာ အားလုံး တှမွေ့ငျ ခဲ့ကွပွီးသားပါ ။ မနှဈ က ထကျစာရငျတော့ ဒီနှဈ သူတို့ အသငျး မှာ အပွောငျးအလဲ တခြို့ ရှိခဲ့တာပေါ့ဗြာ ။ ကြှနျတျော ကတော့ သူတို့ ဆီက ခဉျြးကပျ လာမယျ့ ခွိမျးခွောကျမှု တှကေို အမွဲ စောငျ့ကွညျ့ နပေါတယျ ။ ခနျြပီယံလိဂျ ရဲ့ အဝေးကှငျး မှာ ကစားရတဲ့ ပှဲ မှနျသမြှ ခကျခဲမှု ရှိပါတယျ ။
အဲ့ဒီ အတှကျကွောငျ့ အဂေကျြဇျ ကို ရငျဆိုငျမှ ခကျခဲတာ မဟုတျပါဘူး ။ ကြှနျတျော တို့ဟာ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှု အပွညျ့ ရှိနတေယျ ၊ ဒီပှဲ ဟာ ခကျခဲမယျ ဆိုတာလညျး သိထားပါတယျ ။ နယူးကာဆယျ နဲ့ ပှဲမှာ ကြှနျတျော ပွောခဲ့တဲ့ အကွောငျးအရာ က ပွိုငျဖကျ အသငျး က ခံစဈ အရမျး အသားပေး လှနျးပွီး ၅ – ၄ – ၁ ကစားကှကျ နဲ့ ကစား ခဲ့တာကွောငျ့ သူတို့ ခံစဈ တံတိုငျး ကို ဖွိုဖကျြဖို့ မလှယျခဲ့တဲ့ အကွောငျးပါ ။
မနကျဖွနျ မှာ ကြှနျတျော တို့ ရငျဆိုငျရမယျ အဂေကျြဇျ အသငျး ဟာ နယူးကာဆယျ နဲ့ တခွားစီ ပါပဲ ။ ဒါကွောငျ့မို့ နယူးကာဆယျ နဲ့ ပှဲအပွီး မှာ ကြှနျတျော တို့ရဲ့ ခံယူခကျြ တှကေို ပိုပွီး မွှငျ့တငျနိုငျဖို့ က အရေးကွီးခဲ့ပါတယျ ။ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ မနကျဖွနျ ပှဲဟာ ကြှနျတျော တို့ အတှကျ ခကျခဲတဲ့ ပှဲစဉျ ဖွဈလို့ပါ ။ ” လို့ ဖွကွေား ခဲ့ပါတယျ ။
အေဂျက်ဇ် နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲကြို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ သတင်းထောက် တဦး ရဲ့ ခက်ထန်တဲ့ အမေး ကို ပြုံးပြုံးလေး တုန့်ပြန် ဖြေကြားခဲ့တဲ့ #လမ်းပတ်
မနေ့က အေဂျက်ဇ် အသင်း နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲကြို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာ သတင်းထောက် တဦး ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ နည်းပြ ဖရန့် လမ်းပတ် ကို အနည်းငယ် မာထန်ပြီး ထူးခြားတဲ့ မေးခွန်း တခု ကို မေးခဲ့ပါတယ် ။ သို့ပေမယ့် ဖရန့် လမ်းပတ် ကတော့ တုန့်လှုပ်ရှား မရှိခဲ့ပဲ ၊ အခုလိုမျိုး ပြုံးပြုံးလေးပဲ တုန့်ပြန် ဖြေကြား ခဲ့ပါတယ် ။
သတင်းထောက် – ခင်ဗျား ကို ကြည့်ရတာ အေဂျက်ဇ် ကို ရင်ဆိုင်ရမှာ ကြောက်နေလားဗျ ။
လမ်းပတ် – ( ပြုံးလျက် ) ဒီလို ပြောရအောင် ခင်ဗျား ဘာကို ကြည့်ပြီး မေးလိုက်တာလဲဗျ ?
သတင်းထောက် – ခင်ဗျား မျက်နှာ က အေဂျက်ဇ် ကို ကြောက်ရွံ့ နေတဲ့ ပုံပေါ်လို့ပါ ။
လမ်းပတ် – ( ပြုံးလျက် ) ဒါက ကျွန်တော် ထားနေကြ မျက်နှာထားပဲလေ ။
သတင်းထောက် – ခင်ဗျား နယူးကာဆယ် နဲ့ ပွဲအပြီးမှာ ပြောခဲ့တာက အေဂျက်ဇ် အသင်း ဟာ အရမ်း ကောင်းတယ် ၊ အေဂျက်ဇ် နဲ့ ရင်ဆိုင်မယ့် အကြောင်းပဲ စဉ်းစားနေတယ် ဆို ။
လမ်းပတ် – ( ပြုံးလျက် ) ဟုတ်တယ်လေဗျာ ။ အခု ကျွန်တော် တို့ အေဂျက်ဇ် နဲ့ ပွဲပြီးရင် ဘန်လေ နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲ အကြောင်း စဉ်းစား ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား ?
သတင်းထောက် – ခင်ဗျားပဲ အေဂျက်ဇ် ကို လေးစားတယ် ဆို …
လမ်းပတ် – ” ကျွန်တော် အမှန်တကယ် အေဂျက်ဇ် အသင်း ကို လေးစားပါတယ် ။ မနှစ် က ဒီ အသင်း အရမ်း ခြေစွမ်း ထက်မြက်ခဲ့တယ် ဆိုတာ အားလုံး တွေ့မြင် ခဲ့ကြပြီးသားပါ ။ မနှစ် က ထက်စာရင်တော့ ဒီနှစ် သူတို့ အသင်း မှာ အပြောင်းအလဲ တချို့ ရှိခဲ့တာပေါ့ဗျာ ။ ကျွန်တော် ကတော့ သူတို့ ဆီက ချဉ်းကပ် လာမယ့် ခြိမ်းခြောက်မှု တွေကို အမြဲ စောင့်ကြည့် နေပါတယ် ။ ချန်ပီယံလိဂ် ရဲ့ အဝေးကွင်း မှာ ကစားရတဲ့ ပွဲ မှန်သမျှ ခက်ခဲမှု ရှိပါတယ် ။
အဲ့ဒီ အတွက်ကြောင့် အေဂျက်ဇ် ကို ရင်ဆိုင်မှ ခက်ခဲတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျွန်တော် တို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့် ရှိနေတယ် ၊ ဒီပွဲ ဟာ ခက်ခဲမယ် ဆိုတာလည်း သိထားပါတယ် ။ နယူးကာဆယ် နဲ့ ပွဲမှာ ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ က ပြိုင်ဖက် အသင်း က ခံစစ် အရမ်း အသားပေး လွန်းပြီး ၅ – ၄ – ၁ ကစားကွက် နဲ့ ကစား ခဲ့တာကြောင့် သူတို့ ခံစစ် တံတိုင်း ကို ဖြိုဖျက်ဖို့ မလွယ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းပါ ။
မနက်ဖြန် မှာ ကျွန်တော် တို့ ရင်ဆိုင်ရမယ် အေဂျက်ဇ် အသင်း ဟာ နယူးကာဆယ် နဲ့ တခြားစီ ပါပဲ ။ ဒါကြောင့်မို့ နယူးကာဆယ် နဲ့ ပွဲအပြီး မှာ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ခံယူချက် တွေကို ပိုပြီး မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ က အရေးကြီးခဲ့ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ မနက်ဖြန် ပွဲဟာ ကျွန်တော် တို့ အတွက် ခက်ခဲတဲ့ ပွဲစဉ် ဖြစ်လို့ပါ ။ ” လို့ ဖြေကြား ခဲ့ပါတယ် ။